ဝါးခယ်မ : အခုတလော ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စား နေတဲ့ Sarahah ဆိုတဲ့ App အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
အခုတလော ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စား နေတဲ့ Sarahah ဆိုတဲ့ App အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေ ဒီလောက် အားကောင်းနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ စာဖတ်သူလည်း Sarahah ဆိုတဲ့ App အကြောင်း သိဖူး၊ ကြားဖူး၊ သုံးဖူးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဖြင့်ရင် Sarahah ဆိုတာ ဘာလဲ။ Sarahah ဆိုတာ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ App တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး လူစိမ်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထံမှ စာများနဲ့ မှတ်ချက်များကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ Sarahah မှာတခြားသူကို စာပို့ရင်လည်း ဘယ်သူကပို့မှန်း မသိစေပဲ စာပို့လို့ရပါတယ်။ ဒီ App ရဲ့ နာမည်ဟာ အာရေဗြ ဘာသာစကားအားဖြင့် ရိုးသားခြင်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အချင်းချင်း မိတ်မပျက်စေဘဲ ကိုယ်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ဝေမျှနိုင်ဖို့ ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sarahah ဟာ Snapchat ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အတွက် လူငယ်ပေါင်းများစွာ စအသုံးပြုလာခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာဆိုရင် Sarahah App ဟာ App Store တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ App တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပါပြီ။ Sarahah မှာ Profile တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ဆိုရှယ် မီဒီယာ တွေမှာ သူငယ်ချင်းများနဲ့ လူစိမ်းများက သူတို့ရဲ့ နာမည်မပေါ်ဘဲ မှတ်ချက်များနဲ့ စာများကို လာပို့လို့ရပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ ကိုယ်ကလဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လူစိမ်းတွေကို ကိုယ်ရဲ့ နာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိစေဘဲ စာသွားပို့လို့ရပါသေးတယ်။ Sarahah ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Sarahah မှာ Username၊ Password နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ သင်ရဲ့ Profile Link ကို ဘယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမဆို Share နိုင်ပြီး လူတွေ သင့်ကို ဒီ Link မှတဆင့် မှတ်ချက်များပေးနိုင်အောင် ခွင့်ပြုလို့ရပါတယ်။
ဒီ Link ကနေတဆင့် လူတွေက အမည်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ သင့်ကို စာတွေ၊ မှတ်ချက်တွေ ပေးပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sarahah က ကလေး တွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိရဲ့လားSarahah က တော်တော်သုံးရတာ လွယ်တာကြောင့် ကလေး တွေလည်း အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ စာတွေဟာ ဘယ်သူက ပို့မှန်းမသိဘဲ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့အတွက် လူတော်တော်များများက ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ ရန်လိုတဲ့ စကားတွေကို ဘာ တာဝန်ယူမှုမှမရှိဘဲ အလွယ်တကူ ပြောလာကြပါတယ်။ App Store တွေက Review တွေမှာ ဒီ Sarahah App ကို Cyberbully လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ App ကို စိတ်မခိုင်တဲ့ လူတွေနဲ့ ကလေးတွေ တော့ အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး။ Sarahah ကို အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆို အနည်းဆုံး အသက် ၁၇ နှစ်ကနေ အထက်ရှိသင့်ပြီး ကလေး တွေ Sarahah ကို သုံးမယ်ဆိုရင် profile နာမည်အမှန်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို မသုံးထားသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်က Sarahah ကို အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဒီ App ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ကြိုတွက်ထားဖို့လိုပြီး Sarahah မှာဆိုရင် အမည်မဖော်ပဲ စာပို့နိုင်တဲ့အတွက် လူတော်တော်များများ က မုန်းတီးရေး စကားတွေနဲ့ ရန်လိုတဲ့ စကားတွေ အလွယ်တကူပြောထွက်ကြပြီး ဒီဒဏ်ကို ကောင်းကောင်းကြီးခံနိုင်မှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 4:54 PM
အလံတစ်ရာ က အရည်းကြီး လက်သစ် ( သို. ) ခွန်တန်သတင်းမ...
အခုတလော ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စား နေတဲ့ Sarahah ဆိုတဲ့ App အ...
အလံတစ်ရာ က အရည်းကြီး လက်သစ် ( သို. ) ခွန်တန် သတင်း...
ဖားကန်. အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
နှာခေါင်း သွေးလျှံခြင်း ပြဿနာ အဖြေရှာ
ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ကုသခြင်း